ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေက ခေါင်းဆောင်တွေ ပြင်သစ် အခမ်းအနားကို တက်ရောက်
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေက ခေါင်းဆောင်တွေ ပြင်သစ် အခမ်းအနား...
11 พ.ย. 2561 - 19:11 น.
ပထမ ကမ္ဘာစစ် ပြီးဆုံးချိန်က အခမ်းအနားမှာ တီးမှုတ်ခဲ့တဲ့ ခရာကို အခု နှစ် ၁၀၀ ပြည့်မှာ တီးမှုတ်ခဲ့ပါတယ်
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေက ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပါရီမြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ ပထမကမ္ဘာစစ် စစ်ပြေငြိမ်း စာချုပ် နှစ် ၁၀၀ ပြည့်ဖြစ်တဲ့ ရာပြည့် အခမ်းအနားကို တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
အခမ်းအနားကို ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး တုန်းက ကျဆုံးသွားသူတွေ အတွက် အမှတ်တရ ရည်စူး စိုက်ထူထားတဲ့ Arc de Triomphe မုခ်ဦး မှာ ပြင်သစ် ဒေသစံတော်ချိန် မနက် ၁၁ နာရီ တိတိမှာ ကျင်းပခဲ့ပြီး၊ အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့် နဲ့ ရုရှား သမ္မတ ဗလာဒီ မီယာ ပူတင် တို့လည်း အခမ်းအနားကို တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကမ္ဘာတလွှား မှာလည်း အလားတူး အခမ်းအနားတွေ ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။
၁၉၁၄ ခုနှစ်က စတင်ခဲ့တဲ့ ပထမ ကမ္ဘာစစ်ဟာ၊ ၁၉၁၈ ခုနှစ်မှာ အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီး၊ စစ်အတွင်း စစ်သည် ၁၀ သန်းနီးပါး သေဆုံးခဲ့ပြီး၊ အရပ်သား ၁၀ သန်းလောက် သေဆုံးခဲ့ကြရပါတယ်။
သြစတြေးလျ နိုင်ငံမှာတော့ မြို့တော် ကန်ဘာရာ က အမျိုးသား စစ်ဗိမာန်မှာ ကျင်းပခဲ့သလို၊ အက်ဒါလိတ်ဒ် ကမ်းခြေ မြို့မှာတော့ လေယာဉ်ပေါ်ကနေ ထောင်ပေါင်းများစွာသော စက္ကူနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ အနီရောင် ဘိန်းပန်းပွင့် လေးတွေကို ကြဲချခဲ့ပါတယ်။
နယူးဇီလန်မှာတော့ မြို့တော် ဝဲလင်တန်မှာ သေနတ်ပစ်ဖေါက်ပြီး ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ပထမ ကမ္ဘာစစ်အတွင်း ၇ သောင်း ၄ ထောင် ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ အိန္ဒိယမှာ အမှတ်ရ အခမ်းအနားတွေ ကျင်းပခဲ့ပြီး၊ ဥရောပတိုက် ပြင်သစ် နိုင်ငံမှာတော့ အဓိက အခမ်းအနား ကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
ဗြိတိန်မှာလည်း ပထမ ကမ္ဘာစစ် ပြီးဆုံးခြင်း အခမ်းအနားတွေကို နေရာ အတော်များများ ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ လန်ဒန်မြို့လယ် မှာ ကျင်းပတဲ့ အခမ်းအနားကို၊ ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် လူထုကိုယ်စားလှယ်တွေ တက်ရောက် ဂုဏ်ပြု ခဲ့ကြပါတယ်။
သြစတြေးလျ နိုင်ငံ ကန်ဘာရာ မှာတော့ လူထုပရိသတ် တွေပါ တက်ရောက်ခဲ့
အက်ဒါလိတ်ဒ် ကမ်းခြေ မြို့မှာ စက္ကူ ဘိန်းပန်းပွင်းလေးတွေ ကြဲချ
နယူးဇီလန် အော့လန်း မြို့ စစ်သင်္ချိုင်းမှာလည်း အမှတ်တရာ သွားရောက် ဂုဏ်ပြု
ကျနော်တို့ရဲ့ လက်ရှိပစ္စုပန်ကို ပိုကောင်းဖို့၊ ကျနော်တို့ ရင်သွေးတွေ အတွက် နဲ့ အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေ အတွက် အတိတ်က သန်းခန်းစာကို ယူဖို့လိုအပ်တယ်လို့ သြစတြေးလျ ၀န်ကြီးချုပ် စကော့ မော်ရင်ဆန် က ပြောကြားသွားပါတယ်။ သြစတြေးလျနဲ့ နယူးဇီလန် တပ်ဖွဲ့တွေဟာ ဂယ်လီပိုလီ တိုက်ပွဲမှာ စစ်သည်အင်းအား အမြောက်အမြား ကျဆုံးခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နယူးဇီလန် နိုင်ငံမှာ ဒေသစံတော်ချိန် ၁၁ နာရီ အချိန် ၂ မိနစ် ငြိမ်သက် ခဲ့ပြီး၊ သေနတ် အချက် ၁၀၀ ပစ်ဖေါက် ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ နိုင်ငံတလွှား ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်းတွေက ခေါင်းလောင်း ထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ ကားတွေ သင်္ဘောတွေကလည်း တချိန်တည်း ဥသြဆွဲ ခဲ့ကြပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီ တပ်မှာ စစ်သည် ၁ သန်းကျော် တာ၀န်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ကြီးချုပ် နာရန်ဒရာ မိုဒီ ကတော့ ဒီစစ်ပွဲမှာ အိန္ဒိယအနေနဲ့ တိုက်ရိုက် ပါဝင်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘဲ၊ အိန္ဒိယ စစ်သည်တွေ ဝင်တိုက်တာဟာ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒေလီ စစ်သင်္ချိုင်းမှာတော့ စကော့တလန်နှဲမှုတ်သူ တယောက်ပုံကို ပြသထားပါတယ်။
သြစတြေးလျ အက်ဒါလိတ်ဒ် ကမ်းခြေ မြို့က အခမ်းအနားမှာ ဘိန်းပန်းပွင့်လေး ထိုးစိုက်ထား
ပြင်သစ်နိုင်ငံ မြို့တော် ပါရီက အမှတ်ရ အခမ်းအနားကို တော့ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံတွေက ခေါင်းဆောင် ၇၀ လောက် တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး၊ ပြင်သစ် သမ္မတ အန်မန်နျူရယ် မက်ခရွန်း က ဒီရာပြည့် အခမ်းအနားကို ဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ အညတရ စစ်သည် ဗိမာန် Arc de Triomphe မှာ ကျင်းပခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်သစ်သမ္မတ နဲ့ ဂျာမနီ ဝန်ကြီးချုပ်
တနင်္ဂနွေ နေ့လယ် ပိုင်းမှာတော့ ပြင်သစ် သမ္မတ မစ္စတာ မန်ခရွန်းဟာ ဂျာမဏီ ဝန်ကြီးချုပ် အန်ဂလာ မာကဲလ်ကို ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ တခုမှာ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ပါရီငြိမ်းချမ်းရေးဖိုရမ် ဖြစ်ပြီး၊ ရုရှား သမ္မတ နဲ့ တူရကီ သမ္မတ တို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေက ပြင်သစ်က အခမ်းအနား နေရာမှာ လာရောက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြ
သမ္မတ ထရမ့်ကတော့ စစ်သည်ဗိမာန် တခုသွားမယ့် အစီအစဉ်ကို ရာသီဥတု ဆိုးလို့ ပယ်ဖျက်လိုက်ပါတယ်။ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ အဖွဲ့ ၅၀ ကတော့ သမ္မတ ထရမ့်ကို ရဲ့ ခရီးစဉ်ကို ပါရီမှာ ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေက ခေါင်းဆောင်တွေ ပြင်သစ် အခမ်းအနားကို တက်ရောက်